विद्यार्थी परामर्शका प्रमुख विषय [लक्ष्मणरेखा] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ फाल्गुन ११, मंगलवार १३:३२ गते
सामान्यतया विद्यालयमा आउने अभिभावकलाई सम्बोधन गर्दै हरेक शिक्षक र विद्यालय प्रशासकले भन्ने एउटै वाक्य हुन्छ, ‘विद्यालयमा त केवल १० देखि ४ बजेसम्म अर्थात् ६ घन्टा मात्रै बच्चा बस्छ, २४ घन्टाको बाँकी १८ घन्टा त घरमै उसको समय बित्छ, त्यसैले विद्यालयमा भन्दा घरमा नै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अभिभावक नै ज्यादा सचेत र सतर्क हुनुपर्दछ ।’ सरर हेर्दा यो भनाइ सत्य पनि हो, विद्यार्थीको अधिकांश समय घरमै बित्दछ, तथापि खासमा सिक्ने भनेको विद्यालयमै हो भन्ने कुरा झन् उत्तिकै मह¤वपूर्ण छ ।
अभिभावकले कति प्रयास गर्दागर्दै पनि बच्चाले नसिकेका वा नमानेका कुरा एउटा शिक्षकको सानो प्रयासमा सिकेका वा मानेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसको आशय के हो भने सिक्ने, सिकाउने ठाउँ भनेको अन्ततः विद्यालय नै हो । अभिभावक, समाज, प्रकृति, इष्टमित्र, छरछिमेकी आदिइत्यादि पनि विद्यार्थीको सिकाइका स्रोत हुन्, तर शिक्षकजत्तिको प्रभावकारी ती हुन सक्दैनन् । बालबालिकाको मानसपटमा सिक्ने शिक्षकबाटै हो, हाम्रो सर र म्याडमले भनेको कुरा नै अन्तिम हो भन्ने कुरा गहिरोसित बसेको हुन्छ ।
माथिको सन्दर्भबाट हामीले विद्यालय नै सिकाइको सबैभन्दा उन्नत र अन्तिम स्थल भएको र शिक्षकशिक्षिका नै सिकाइका सबैभन्दा प्रभावकारी स्रोत भएको तथ्यबोध ग¥यौँ । निर्धारित विषयवस्तु सिकाइका कुरा मात्रै होइनन्, जीवनका अनौपचारिक विषयका कुरा सिकाउने सन्दर्भमा पनि आफूले पढाउने शिक्षक, शिक्षिकाले भनेका छन् भने त्यो ठीक हो भन्ने मान्यता बालबालिकामा रहेको हुन्छ । यसर्थ, एउटा बालकले वा बालिकाले जीवनको सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा योग्य हुनका लागि आवश्यक प्रेरक परामर्श पनि विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुबाटै पाउनुपर्ने त्यो प्रभावकारी हुने सत्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
त्यसोभए, कुनकुन त्यस्ता क्षेत्रहरु होलान्, जुन क्षेत्रमा हरेक शिक्षकले बालबालिकालाई लगातार सिकाइरहनुपर्ने, सम्झाइरहनुपर्ने र परामर्श प्रदान गरिरहनुपर्ने हुन्छ ? औपचारिक विषयमा बाहेक कुनकुन त्यस्ता अनौपचारिक तर निकै मह¤वपूर्ण क्षेत्रहरु छन्, जुन विद्यालयका शिक्षकबाट बालबालिकाले प्रभावकारी तरिकाले सिक्न, जान्न, बुझ्न र महसुस गर्न सक्छन् ? आउनुस्, तिनका बारेमा चर्चा गरौँ ।
१. पढाइलेखाइको मह¤व र आवश्यकता
विद्यालय धेरै कुरा सिकाउने ठाउँ त हो, तर पनि मूलतः निर्धारित विषयवस्तुलाई सिकाउने ठाउँ नै हो । विद्यालयमा सरकारले निर्धारण गरिदिएका विषयहरुलाई निश्चित समय, तालिका र संरचनामा शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले परीक्षामा प्राप्त गर्ने नतिजा नै उसको पढाइलेखाइको अन्तिम मापनको आधार हो । तसर्थ, हरेक विद्यार्थीको पढाइलेखाइको कुरा सबैभन्दा पहिला आउँछ ।
बालबालिकाहरुलाई पटकपटकको परामर्शका माध्यमले पढाइ र लेखाइको मह¤व बोध गराउनु असल शिक्षकको अहं दायित्व हुन जान्छ । ‘हेर, जीवनमा पढाइको ठूलो मह¤व छ । सामान्य जीवन बाँच्न पनि नपढी नहुने भएको छ । कुनै पनि जागिर, पेसा वा व्यवसायका लागि पढाइ नभई हुँदैन । तसर्थ, पढाइलाई पहिलो मह¤व दिनुपर्दछ । समयमै नोट बनाउने, टिपोट गर्ने, अभ्यास गर्ने, पढ्ने, लेख्ने, दोहो¥याउने गरेर आफ्नो विषयवस्तुलाई दुरूस्त पार्नुपर्दछ । पढाइ ठूलो कुरा हो’ भन्ने तरिकाले बालबालिकालाई सम्झाइरहनुपर्ने हुन्छ ।
यो विषयको स्मरण गराउनका लागि जुनसुकै विषयका शिक्षक भए पनि हुन्छ । अथवा यसो भनौँ, कुनै पनि विषयका शिक्षकले सम्झाउन सक्ने र सम्झाउनुपर्ने विषय हो, यो । ‘कालो अक्षर भैँसीबराबर’ भन्ने त उखान नै छ । पढाइ यति आधारभूत विषय भयो कि यो त जसले पनि अनिवार्यरुपमा प्राप्त गरेकै हुन्छ । बालबालिकालाई सम्झाउनुपर्ने अनेक विषयमध्ये जीवनमा पढाइको औचित्य, आवश्यकता र मह¤वको कुुरा सबैभन्दा अगाडि आउँछ । हरेक असल शिक्षकले बालबालिकाले महसुस गर्ने गरी औपचारिक पढाइलेखाइको अपरिहार्यताका बारे परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विद्यार्थी परामर्शको पहिलो क्षेत्र हो ।
२. आत्मसंयम र अनुशासन
बालबालिकालाई बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने अर्को विषय हो, अनुशासन वा आत्मसंयम । आत्मसंयम भनेको आफूले आफूलाई संयम र नियन्त्रणमा राख्ने काम हो । अनुशासन भनेको पनि आफूले आफूलाई शासन गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने काम हो । अनुशासनको अर्थ केवल हातगोडा बाँधेर, मुख थुनेर, कुखुराको माउ ओथारो बसेजसरी बस्नु भन्ने कदाचित् होइन ।
सामान्यतया हाम्रा बालबालिकाले अनुशासन भनेर शिक्षक, शिक्षिकाले भनेपछि मान्ने, उहाँको अगाडि असल बन्ने, बदमासी नगर्ने, मौन बस्ने, नबोल्ने भन्ने ठान्छन् र हामी अधिकांशको मान्यता पनि यही नै रहेको देखिन्छ । तर, अनुशासन भनेको आफूले भनेअुसार आफूलाई नैतिक मूल्य र नियममा अभ्यस्त तुल्याउनु हो । कक्षामा शिक्षक हुँदा कत्ति पनि हल्ला नगर्ने, ज्ञानी भएर बस्ने, शिक्षकले भनेको सबै कुरा जस्ताको त्यस्तै मान्ने तर शिक्षक अनुपस्थित हुनासाथ बदमासीको हद पार गर्ने विद्यार्थीलाई अनुशासित भनेर भन्न सकिँदैन ।
अर्काको अगाडि निकै सभ्य बन्ने तर पछाडि भयानक असभ्यता प्रकट गर्ने कामलाई अनुशासन भन्न सकिँदैन, न त त्यो आत्मसंयम नै हो । चाहे कसैले भनोस् नभनोस्, चाहे कोही अघि होस् वा पछि होस्, आफ्नो विवेक र प्रज्ञाले भनेअनुसार आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने मानिस नै अनुशासित कहलाउँछ । कोही हुँदा एक थोक गर्ने, कोही नहुँदा अर्को थोक गर्ने त एक प्रकारले चोर हो, छली हो । बालबालिकालाई यसप्रकार आत्मअनुशासनको शिक्षा दिनुपर्ने शिक्षकको अर्को दायित्व हो ।
अनुशासन विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो गहना हो, शृङ्गारको साधन हो । विद्यार्थी जीवनको मात्रै होइन, मानवजीवनकै दिव्य सूत्र हो । यही अनुशासनको परिपालनले नै हामी मनुष्य हुन पाएका हौँ । अनुशासनबिनाको पढाइ सुगन्धबिनाको फूलजस्तै हुन्छ । अनुशासित विद्यार्थी सबैको प्रिय हुन्छ । सबैले उसप्रति उच्च श्रद्धा र विश्वास प्रकट गर्दछन् । तसर्थ, तिम्रालागि अनुशासन वा आत्मसंयमको ठूलो अर्थ छ भनेर बालबालिकालाई हामीले बारम्बार परामर्श गरी उसलाई अनुशासित जीवनको बाटोमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । यो, बालबालिका परामर्शको तेस्रो क्षेत्र हो ।
३. गृहकार्य र अभ्यास
‘विद्यालयमा पढेका कुरालाई जबसम्म तिमीले अभ्यासमा ल्याउँदैनौँ तबसम्म त्यो तिम्रो आफ्नो हुन सक्दैन । सिकेको कुनै पनि कुरा यदि पटकपटक अभ्यास नगर्ने हो भने सिकेको नौ दिनमा नौलो हुन्छ र बीस दिनमा बिर्सन सकिन्छ । तसर्थ, त्यसलाई बारम्बार अभ्यास गरिहनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अभ्यास भनेकै गृहकार्य हो । विद्यालयमा शिक्षकले पढाएका विभिन्न विषयका सन्दर्भ र पाठहरुलाई घरमा लेखेर वा पढेर गरिने अभ्यासले तरोताजा राख्न मदत गर्दछ । तसर्थ, त्यो गृहकार्य निकै मह¤वपूर्ण हुन्छ’ भनेर हरेक शिक्षकले विद्यार्थीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ ।
गृहकार्य भन्नासाथ सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीले विद्यालयको कामलाई घरमा गर्नु भनेर बुझ्ने गर्दछन् । त्यो ठीक छ । त्यसबाहेक गृहकार्यका अनेक आयामलाई पनि हामीले सम्झाउनुपर्ने हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षकले दिएका विभिन्न विषयका पाठलाई सम्पन्न गर्ने कामसँगै घरमा बाबाआमालाई सघाउने, फूलकरेसामा पानी हाल्ने, सरसफाइमा सघाउने, खाना बनाउनेलगायतका घरका अन्य विभिन्न कामलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । गृहकार्यभित्र घरका अन्य कामकाज पनि पर्दछन् ।
गृहकार्यको संस्कारले बालबालिका बरालिन पाउँदैनन् । उनीहरुले आफूले एकपटक गरेको कामलाई दोहो¥याउने वा तेह¥याउने अवसर प्राप्त गर्दछन् । जब बालबालिकाले गृहकार्य गर्दैनन् वा त्यसमा रूचि दिँदैनन् तब नचाहिने विषयमा तिनको रूचि बढ्न जान्छ । गर्नुपर्ने काम बाँकी रहन्छ । पढाइलेखाइका सबै प्रयास व्यर्थ भएर जान्छन् ।
तसर्थ, असल शिक्षकले गृहकार्यलाई अनिवार्यताभित्र समेटेर त्यसमै आफूलाई अभ्यस्त राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले बालबालिकालाई परामर्श प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ । यसले बालबालिका गृहकार्यप्रति सचेत हुन्छन् । घरका सबै काममा बाबुआमालाई पनि राहत महसुस हुन्छ । यो शिक्षकले परामर्श नगरी नहुने तेस्रो क्षेत्र हो ।
४. समाज र सामाजिकता
शिक्षकले विद्यार्थीलाई सामाजिकताको पनि ज्ञान दिनुपर्दछ । सामाजिक विषयमा पनि कतिपय सन्दर्भ बालबालिकाले आफैँ सिक्दछन्, तर पनि कतिपय सन्दर्भमा अहिलेको समयले पनि बालबालिकालाई असामाजिक बनाउँदै लगेको छ । मोबाइल, ल्यापटप र टेलिभिजनमा एकोहोरो लगावले गर्दा बाहिरी मानिस र बाहिरी जीवनका बारेमा बालबालिका बेखबरजस्तै छन् ।
घरमा आउने मानिससित बोलचाल नहुने, घरकै पनि कति मानिससित चर्को बोल्ने, भनेको नमान्ने, बाहिर छरछिमेकमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै जानकारी नराख्ने, खेतबारीका काममा नसघाउने, मानसिक समस्या बढाउनेलगायतका काममा आज बालबालिकाको अधिकांश समय गुज्रेको देखिन्छ । यो शुभसङ्केत होइन ।
बालबालिका समूहमा काम गरुन्, छरछिमेकीसित संवाद गरुन्, हाँसेर बोलून्, दुःखमा परेकालाई सघाऊन्, बाँडेर खाऊन्, मिलेर बसून्, सामाजिक काममा सहभागी होऊन्, एकलकाँटे स्वभावलाई त्यागून् भन्नेतिर हरेक असल शिक्षकले ध्यान दिएका हुन्छन् ।
कुनै पनि काममा जिम्मेवारी लिन खोज्ने, अघि बढ्न खोज्ने, नेतृत्व गर्न खोज्ने बालबालिकालाई निरन्तर उत्प्रेरित गरिरहनुपर्दछ । यसले गर्दा बालबालिकामा बिस्तारै एकलकाँटे स्वभाव हराउँदै जान्छ र सामाजिक भावनाको उदय हुन्छ । सामाजिक मानिसलाई सबैले रूचाएजस्तै हाम्रा बालबालिकाका पनि सबैका प्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो शिक्षकले परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने चौथो विषय हो ।
५. आदर, सम्मान र सुसंस्कार
भर्खरै हामीले सामाजिकताको कुरा गरिरहँदा छुटाएको विषय हो, अरुप्रतिको सत्कार, आदर र सम्मानको संस्कार । बालबालिकालाई आफूभन्दा ठूलालाई आदर गर्ने र सानालाई स्नेह गर्ने संस्कारको विकासका लागि शिक्षकले बारम्बार भनिरहनुपर्ने हुन्छ । घरमा आउने कुनै पनि पाहुना वा आगन्तुकलाई नमस्कार गर्ने, अभिवादन गर्ने र हाँसेर स्वागत गर्नेजस्ता बानी उनीहरुलाई सिकाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘सबै मानिस सम्मानका भोका हुन्छन् । जसरी, हामी अरु कसैले हामीलाई अपमान गर्दा मन पराउँदैनौँ त्यसैगरी अरुले पनि हामीलाई मन पराउँदैनन् । जसरी, कसैले हामीलाई मुस्कुराएर नमस्कार गर्दा हामी खुसी हुन्छौँ त्यसैगरी अरु पनि खुसी हुन्छन् । तसर्थ, सबैलाई सम्मान गरेर आफू र अरु दुवै खुसी हुने काम गर्नुपर्दछ । अरुलाई सम्मान गर्न कहिल्यै पछि पर्नुहुँदैन’ भन्ने कुराले बालबालिकालाई सधैँ प्रशिक्षित गरिरहनुपर्दछ ।
‘सम्मान चाहनेले सम्मान दिन पनि जान्नुपर्दछ’ भनेर त्यसै भनिएको होइन । हामीकहाँ त झन् सम्मान र आदरको निकै पुरानो संस्कार छ । ‘अतिथि देवो भवः’ भनेर घरमा आउने पाहुनाप्रति सम्मान गर्ने हाम्रो सनातन संस्कार हो । बालबालिकालाई आदर, सत्कार र सम्मानको दिव्य संस्कारको विकास गराउनु असल शिक्षकको पाँचौँ दायित्व हो । यस्तो प्रकारको परामर्श निरन्तर आवश्यक देखिन्छ ।
६. सहयोगी भावनाको विकास
शिक्षकले बालबालिकालाई सहयोगको संस्कार विकासमा पनि सघाउनुपर्ने हुन्छ । मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजमा एकअर्कालाई सघाउने संस्कार हुन्छ । कसैलाई पनि कुनै प्रकारको सहयोग नगर्ने हो भने घनघोर जङ्गलमा गएर बस्दा हुन्छ । समाज भनेपछि विभिन्न सोच, चिन्तन र शैली भएका मानिसको संरचना हो । कति दुःखी, पीडित मानिस हुन्छन् । तिनका लागि बाँच्छु भन्ने भाव नै सहयोगी भाव हो । कसैलाई उसको नजिकै बसेर सघाउने वा उसका लागि काम गर्ने, योग गर्ने, त्याग गर्ने व्यक्तिलाई सहयोगी भनेर भनिन्छ ।
बालबालिकाले विद्यालयमै सहयोग गर्ने सीप सिक्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयमा पढ्ने कुनै अपाङ्ग, सुस्त साथीहरु छन् भने तिनलाई कुनै न कुनै प्रकारले सघाउने, नजानेको कुरा सिकाएर सघाउनेजस्ता काम तिमीले सधैँ गर्नुपर्दछ भनेर बालबालिकालाई सहयोग र त्यागका लागि पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जन्मदिनको दिन वा अन्य कुनै विशेष अवसरका समयमा बालबालिकाले दस, बीस रूपैयाँ जम्मा गरी कुनै अशक्त, वृद्ध वा दीनदुःखीलाई सघाउन सक्दछन् । मेरो जन्मदिनका दिन मैले अलिकति पनि पुण्यका काम गर्न पाएँ भन्ने भाव विद्यार्थीमा जाग्यो भने त्यसले राम्रो सन्देश जान्छ । चाहे भावले होस्, चाहे पैसाले होस्, चाहे शरीरले होस्, कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग गर्नु विद्यार्थीको कर्तव्य हो भनेर असल शिक्षकले बालबालिकालाई परामर्श प्रदान गर्ने वा सम्झाउने काम गरिरहनुपर्दछ । यो अर्काे छैटौँ मह¤वपूर्ण क्षेत्र हो ।
७. सरसफाइ, स्वास्थ्य र शुचिता
शिक्षकले बेलाबेलामा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शुचिताको सन्दर्भमा पनि बालबालिकालाई सचेत गराइरहनुपर्ने हुन्छ । ‘जस्तो पायो उस्तै खाने कुरा खानुहुँदैन, फोहोर कपडा लाउनुहुँदैन । फोहोरी हुनुहुँदैन । बारम्बार नुहाइरहनुपर्दछ । सिँगान फाल्ने, कपाल काट्ने, नङ काट्ने गरिरहनुपर्दछ । स्मार्ट मान्छे सबैको प्रिय’ हुन्छ भनेर परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘घरआँगनलाई सधैँ सफा राख्नुपर्दछ, आफूले ओढेको सिरक, ओछ्याएको बिछौना, सिरानी मिलाएर राख्नुपर्दछ । फोहोर जहाँ पायो उहीँ फ्याँक्नुहुँदैन । मानिसको जीवन निकै मह¤वपूर्ण छ । हाम्रो शरीरका प्रत्येक अङ्ग, प्रत्यङ्ग निकै मह¤वपूर्ण र नाजुक छन् । यिनको सुरक्षा गर्नुपर्दछ’—यसप्रकारको परामर्शले बालबालिका बिस्तारै सरसफाइका लागि प्रेरित हुँदै जान्छन् ।
एउटा असल शिक्षकले यो विषयलाई पनि उत्तिकै मह¤वका साथ बालबालिकाका बीचमा चर्चा गर्ने, परामर्श गर्ने वा अभ्यास गर्ने गर्नुपर्दछ । शरीर नभए कुनै पनि कुरा नहुने भएका हुँदा शरीरको हिफाजत गर्ने कुरामा सधैँ एक कदम अघि हुनुपर्दछ भनेर बालबालिकालाई हामीले परामर्श प्रदान गर्नुपर्दछ । असल शिक्षकको परामर्शको यो सातौँ क्षेत्र हो ।
८. समयको परिपालन
समय सबैभन्दा बलवान् हुन्छ भन्ने सत्य विद्यार्थीको मानसपटमा ररिहरहनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि काममा ढिलाइ नगर्ने, समयमै काम सम्पन्न गर्ने, समयको ख्याल गर्ने, यसलाई अक्षरशः परिपालन गर्ने विद्यार्थी कहिल्यै पछि पर्दैन भनेर बालबालिकाले बुझ्नुपर्दछ ।
संसारमा तिनै मानिस महान् भएका छन्, जसले समयको एकएक सेकेन्डलाई उत्तिकै निष्ठाका साथ सदुपयोग गरेका छन् । समयको अखण्ड धारमा एउटा मानिसको जीवनभरिको समयले कति नै अर्थ राख्ला र ! त्यसैले, यति नाजुक र क्षणिक जीवनको समयलाई पनि समयमै सदुपयोग गरिएन भने समयले हामीलाई नराम्रोसित गिज्याउँछ ।
‘समयको नदी अनवरत बगिरहेको हुन्छ । समयरुपी नदीको यो प्रवाहमा जो प्रवाहित हुन सक्दैन, उसलाई समयको प्रवाहले एउटा किनारामा लगेर फ्याँकिदिन्छ । जसले आजको कामलाई भोलिका लागि साँचेर राख्छ, उसका सपना पनि भोलिका लागि साँचिन पुग्दछन्, नराम्ररी भाँचिन पुग्दछन् । कामलाई बासी बनाउनेको जीवन पनि सधैँका लागि बासी भएर जान्छ । तसर्थ, तिमी सधैँ समयप्रति सचेत बन र सबै काम समयमै पूरा गर’—यसप्रकारले बालबालिकालाई समयको सम्मान गर्दै, समयमै सम्मानित हुन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । यो विद्यार्थी परामर्शको आठौँ तर निकै मह¤वपूर्ण क्षेत्र हो ।